ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော် ဇလုပ်စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနခြံ နှင့်ပေါက်အင်းစိုက်ကွင်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး – Agri Digit News
Posted on Author adminComments Off on ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော် ဇလုပ်စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနခြံ နှင့်ပေါက်အင်းစိုက်ကွင်းများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော် သည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်း၊ ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာဇော်လွင်ထွန်း နှင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများနှင့် အတူ ဇူလိုင်လ(၂၇)ရက် ညနေပိုင်းက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မုံရွာမြို့၊ ဇလုပ်စိုက်ပျိုးရေး သုတေသနခြံ သို့ရောက်ရှိကြရာ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာနိုင်ကြည်ဝင်း က စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသုတေသနဗဟို ဌာန (Regional Research Center) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများ နှင့် စပါး၊ ပဲစဉ်းငုံမျိုးများ၊ နှမ်းမျိုး၊ ကုလားပဲနှင့် ဂျုံမျိုးများ အထွက် ယှဉ်ပြိုင်စမ်းသပ် ဆောင်ရွက် နေမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ရှင်းလင်းတင်ပြချက်များအပေါ် ဒုတိယဝန်ကြီး က သုတေသနပညာရှင်များ အနေဖြင့် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးသုတေသနဗဟိုဌာန ဆောင်ရွက်ရန် ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုများကို အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ကြရန်၊ ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး သုတေသနဗဟိုဌာနလုပ်ငန်း အတွက် ဆက်သွယ်ပူးပေါင်းမည့်စနစ်များ၊ တောင်သူ စိုက်ကွင်းများ ၌ ဆောင်ရွက်ရန်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများအား ဆွေးနွေးမှာကြားသည်။
ဒေသအတွင်း၌ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနလုပ်ငန်းများအား တောင်သူနည်းပညာပေး လုပ်ငန်းများနှင့်အတူဆောင်ရွက်ရန်၊ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဘက်ပေါင်းစုံ ပါဝင်သည့်နည်းစနစ်ဖြင့် တောင်သူများ နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တောင်သူ့ ပြဿနာများကိုနားလည်သိရှိပြီး ဖြေရှင်းနိုင်သည့်သုတေသနပြုရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မုံရွာမြို့ ဇလုပ် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနခြံ အပါအဝင် အောင်ပန်းမြို့၊ မကွေးမြို့၊ ရမည်းသင်းမြို့၊တပ်ကုန်းမြို့ စသည့် မြို့ကြီး(၅)မြို့တို့တွင် ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး သုတေသန ဗဟိုဌာန (Regional Research Center)များအဖြစ် တည်ဆောက် အကောင် အထည် ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် အဝါရောင်မှိုစေ့ရောဂါဒဏ်ခံနိုင်ပြီး အထွက်နှုန်းကောင်းမွန်သော သက်လျင်မျိုးရရှိစေရေးအတွက် ရေဆင်း-၁၄ ပဲတီစိမ်းမျိုး ကို စံထားပြီး မျိုး(၁၈)မျိုးကို သုတေသနပြု စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးထားရှိမှုအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာနိုင်ကြည်ဝင်း နှင့် သုတေသနပညာရှင်များက ရှင်းလင်း ဖြေကြားသည်။ အဆိုပါ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးမှုကို ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့မှ စတင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီး ရရှိမည့် သုတေသနရလဒ်အပေါ် မူတည်ကာ မျိုးအမည်သတ်မှတ်၍ လုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်သည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော် သည် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာရဲတင့်ထွန်း၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းလှိုင်ဦး တို့လိုက်ပါလျက် ဇူလိုင်လ(၂၈)ရက် နံနက်ပိုင်းက စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ ပေါက်အင်းစိုက်ကွင်းသို့ရောက်ရှိပြီး ၊ မျိုးသန့် မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ပေး နေမှုနှင့် တောင်သူပညာပေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး မျိုးသန့် ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာများ ဆွေးနွေးမှာကြားသည်။
ပေါက်အင်းစိုက်ကွင်းသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဂျုံ ၊ ကုလားပဲနှင့် နေကြာစိုက်တောင်သူများ အတွက် လိုအပ်လျှက်ရှိသော မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ထုတ်လုပ်ပေးရန် ဂျုံ (၆၉၆) ဧက ၊ ကုလားပဲ (၁၄ဝဝ) ဧက ၊ စပ်မျိုးနေကြာ(၁၀)ဧက စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. KristianSchmid ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ။
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ သည် အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ နှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ နှင့်အတူ ဇွန်လ ၄ ရက် မွန်းလွဲ ၂ နာရီ အချိန်က ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. KristianSchmid ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဧည့်ခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ကော်ဖီ-ရာသီသီးနှံဌာနခွဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောင်းဦးမြို့နယ်၊ ပေါက်အင်းစိုက်ကွင်း၏ တောင်သူပညာပေးကွင်းသရုပ်ပြပွဲကို ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ရာ ပြပွဲအခမ်းအနားသို့ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ချောင်းဦးမြို့နယ် ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးမျိုး ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဆန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီး ဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဇော်ထွန်းမြင့်(စက်မှုသီးနှံစိုက်ပျိုးပညာပေးရေး)၊ ကော်ဖီ-ရာသီ သီးနှံဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်ဆွေ၊ စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာထွန်းရွှေ၊ သုတေသနပညာရှင် ဒေါက်တာအောင်မိုးမျိုးတင့်၊ တောင်သူလယ်သမားများ၊ ခြံစိုက်ကွင်းများမှဝန်ထမ်းများ စုစုပေါင်း (၃၆၀)ခန့် တက်ရောက်ကြသည်။
ရာသီဥတုနှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် စိုက်ပျိုးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တန်ဖိုး ကွင်းဆက် စီမံကိန်း(CFAVC)ကနဦး ဆောင်ရွက်ရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ။